Macaamiisha Ma Iibsadaan Wax Walboo Kaamil Ah | Martech Zone
Sabti, Agoosto 29, 2009 Jimco, Juun 12, 2015 Douglas Karr
Mid ka mid ah isbeddelada ugu cajiibka badan ee aan aaminsanahay in baraha bulshada ay keeneen waa burburka kaamil ah summad. Mar dambe macaamiisha ma filayaan wax kaamil ah… laakiin waxaan filaynaa daacadnimo, adeegga macaamiisha, iyo fulinta ballamo kasta oo ay shirkaddu u dejiso rajooyinkeeda.
In qado macmiil usbuucii la soo dhaafay at Xalka Bitwise, Madaxweynaha iyo Agaasimaha guud Ron Brumbarger ayaa u sheegay macaamiishiisa in Bitwise doono khaladaadka make laakiin inay had iyo jeer ku dadaalaan sidii ay si buuxda uga soo kaban lahaayeen iyaga oo u eegi lahaayeen danaha macmiilka. Miiska waxaa ku sugnaa dhowr macmiil oo muhiim ah - falcelintuna rajo wanaagsan ma noqon karto. Waxaa jiray bogaadin loo dhan yahay oo ku saabsan adeegga macaamiisha iyo taageerada ay bixiyaan shaqaalaha Bitwise.
IMHO, maamuleyaal magac weyn ayaa had iyo jeer loo isticmaali jiray inay qabtaan shaqo la yaab leh oo ah ilaalinta sumcadda sumcadda farriin isdaba joog ah, sawirro, iyo xiriirka dadweynaha. Maalmahaas ayaa hadda inaga dambeeya, in kastoo, maadaama shirkaduhu aysan mar dambe xakamayn karin ama fara-gelin karin warbaahinta bulshada iyo waxa macaamiisha iyo macaamiisha ay ka sheegayaan iyaga. Macaamiishaadu hadda waxay hayaan furaha astaantaada.
Taasi waxay u muuqan kartaa cabsi marka hore… shirkaddaada waxaa laga yaabaa inay ku mashquulsan tahay inay haysato kooda kaamil ah sumadda nool. Ha ka welwelin taas. Xaqiiqdii… jooji. Waxyeello intaa ka badan ayaad u geysaneysaa shirkaddaada adoo isku dayaya inaad daboosho ceebaha ay leedahay intii aad ugu dhawaaqi lahayd meelaha bannaan. Shirkad kastaa waxay leedahay xoog iyo daciifnimo weligoodna macmiil iyo macmiilku waxay filayaan inay dhibaatooyin dhacaan. Maaha khaladaadka dhaca ee waa sida shirkadaadu uga soo kabanayso iyaga.
Xitaa qiimeynta alaabada iyo dib u eegista, tani waa kiiska. Qiimeynta 5-xiddig ayaa dhab ahaantii dhaawici karta iibkaaga halkii aad ka caawin lahayd iyaga. Markaan aqrinayo dib u eegista wax soo saarka, waxaan u jeedaa inaan toos ugu maro dib u eegista xun. Kama boodayo iibsiga, in kastoo. Taabadalkeed, aniga oo dib ufiirinaya faallooyinka xun, waxaan go aansadaa in kuwaasi yihiin daciifnimo aan la noolaan karo iyo inkale. Ii iibi qalab weyn oo wata dukumiinti cabsi leh maalin kasta! Anigu ma akhriyo buugaagta wax soo saarka.
Markii aan arko qiimeyn 5-xiddigle ah, sida caadiga ah waxaan uga baxayaa dib-u-eegista gebi ahaanba oo waxaan fiiriyaa meelo kale. Ma jiraan wax hagaagsan oo waxaan rabaa in laygu wargeliyo cilladaha. Mar dambe ma iibsado kaamilnimo. Anigu ma aaminsani in kaamil ah mar dambe. Markii la soo bandhigayay ganacsiga elektaroonigga ah sanadkii la soo dhaafay, shirkad weyn oo soo saarta qalabka elektarooniga ayaa sheegtay in dib u eegista qumman ay inta badan dhaawaceyso iibintooda wax soo saar. Ma jiro qof kale oo aaminsan aaminaadda, sidoo kale.
Waxay u muuqan kartaa wax aan caqli gal ahayn, laakiin waxaad ubaahnaan kartaa inaad suuq geyso awoodahaaga oo aad si buuxda u qiratid daciifnimadaada haddii aad jeclaan laheyd inaad kordhiso iibka, dejiso waxyaabaha aad rajeyneysid, oo aad awoodid inaad fuliso. Macaamiil faraxsan ma ahan macaamil leh shey hagaagsan… waa macaamil ku faraxsan shirkaddaada, sida wanaagsan ee ay u fuliyeen, iyo - intabadan - sida wanaagsan ee aad uga bogsatay qaladaadkaaga ama fashilkaaga.
Tags: xiddiga 5qiimeynta macaamiishadib u eegista macaamiishadib u eegista macaamiishaReviewsqiimeynta xiddigaha